Ma u qalantaa iibsashada MacBook Air 2018? | Waxaan ka socdaa mac
Markaad leedahay Mac oo aad tixgeliso inaad cusbooneysiiso, su'aasha weligeed ah ayaa soo baxaysa oo ah Mackee ayaa ku habboonaan doonta baahideyda. Mabda 'ahaan, kala duwanaanshaha' Mac 'wuxuu u qaybsan yahay desktop ama laptop haddii aad doorato kala duwanaanshaha laptop-ka, sadarka koowaad waxaan leenahay MacBook Pro iyo MacBook, laakiin Weli ma MacBookga ayaa weli soo jiidasho leh?
Dabcan. Macs "waa gabow" oo aad u caafimaad qaba. Maanta waxay si buuxda u ansaxinayaan tiro badan oo shaqooyin ah. Waa run inaysan haysan shaashadda ugu fiican suuqa, laakiin waxay leeyihiin faa'iidooyin badan.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah macaamiisha Apple waxay ku dambeeyaan inay doortaan a si buuxda loo tijaabiyay iyo iibsiga moodooyinka hadda jira ee 'MacBook' iyo 'MacBook Pro' Waxay soo bandhigaan kiiboodhadhka balanbaalis ee muranka dhaliyay. Ka tagida shaashadda, taas oo aan ahayn qeybta dambe iyo Naqshadeynta in qaar ka mid ah ay noqon karto mid duugoobay, gaar ahaan shaashadda, inta kale dhammaantood waa faa'iidooyin.
Cabirku wuxuu la mid yahay MacBook, laakiin si isku mid ah ayuu u eg yahay ka dambeeya. Intaa waxaa dheer, in walxaha kale ay guuleysato. Tusaale waa nolosha batteriga, taas oo ka sarreysa kumbuyuutarrada hadda jira, xitaa MacBook Pro, oo wax yar ka weyn inuu leeyahay batteri badan, sababtoo ah waxqabadka sare ee loo baahan yahay. Batariga MacBookga wuxuu socdaa 12 saacadood.
Qodob kale oo xoog leh maanta waa kala duwanaanshaha nooca dekedaha. Iyadoo kombiyuutarada hadda jira ay leeyihiin USB-C, kiiskan waxaan leenahay dekedo USB-A ah iyo aqriyaha kaarka SD. Sida qiimaha, ugubka ayaa la bixiyaa. MacBook-gu wuxuu ku kacayaa € 1500 MacBookga hawada waxaa laga heli karaa maalmahan iib ahaan wax ka badan € 900. Waxaa laga yaabaa in sababtaas awgeed, markaan tagno maktabadaha ama garoomada diyaaradaha, aan aragno waxyaabo badan oo MacBook Airs ah. Maxaa intaa ka badan, Waa mashiinka ugu fiican ee isticmaalayaasha doonaya inay ka bilaabaan adduunka Apple oo aan haysan cudurdaar ay ku iibsadaan kombiyuutar qaali ah haddii aysan hadhow ka faa'iideysan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ma u qalantaa iibsashada MacBook Air 2018?
watchOS 4.3.2 iyo tvOS 11.4.1 oo si rasmi ah loogu sii daayay qof walba